Atallah Béatrice : « Tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana » -
AccueilSongandinaAtallah Béatrice : « Tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana »
Atallah Béatrice : « Tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana »
Nilaza ny heviny mahakasika ny toe-draharaha politika sy ny fanakorontanana ankehitriny ny minisitry ny Raharaham-bahiny teo aloha (MAE), Atallah Béatrice. Nambarany, araka izany, fa tsy vahaolana ho an’ny firenena intsony ny fanonganam-panjakana sy ny fahefana kasaina alaina eny an-dalambe, toa ny ataon’ireo depioten’ny fanovana, araka ny filazan’izy ireo ao amin’ny mpanohitra azy.
Amin’ity minisitra teo aloha ity, tsy mitondra na inona na inona ho an’ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ny hetsika fanakorontanana sy ny fanaovana sorona ny vahoaka, izay kasaina atao tohatra fiakarana sy ahazoan-tseza sy ny tombontsoa manokana. « Izao no ataovy an-tsaina, tsy mitovy velively ny tamin’ny taona 2013, tamin’ny andron’ny Tetezamita, sy ny amin’izao fotoana izao. Tamin’ny andron’ny fitondrana Tetezamita, “Feuille de Route” na Tondrozotra no nitondrana ny firenena fa amin’izao fotoana izao kosa efa Fanjakana Repoblikanina, ka ny lalàm-panorenana no tandrovana mandrakariva. Tsy misy afa-tsy ny fanarahana ny Lalàm-panorenana ihany ahafahana mampandeha ny fiainam-pirenena ao anatin’ny lamina”, hoy i Atallah Béatrice.
Notsindrin’ity minisitra teo aloha ity fa raha miditra sy miroso amin’ny fametraham-pialan’ny Filohan’ny Repoblika, avy hatrany dia miditra amin’ny krizy ny firenena. “Efa manomboka miakatra tsikelikely ny toe-karen’i Madagasikara, ary efa tsapa sy hita mivaingana izany ankehitriny. Noho izany, tsy zakan’ny firenena intsony ny krizy vaovao hiseho raha toa ka hisy izany fandrombaham-pahefana amin’ny alalan’ny fanonganam-panjakana izany. Eto aho dia manao antso avo ary mitalaho ny fahendren’ny Malagasy rehetra tsy an-kanavaka, indrindra ireo mpanao politika, mba tsy hampidaraboka indray an’i Madagasikara”, hoy hatrany i Atallah Béatrice.
Nohamafisiny mantsy fa raha toa ka miziriziry amin’ny fanonganam-panjakana ireo voalaza fa depioten’ny fanovana, iraisan’ny Tim sy ny Mapar, ireo azo antoka fa hihantona sy ho tapaka avy hatrany ny famatsiam-bola.